Ireo firenena any Azia Atsimoatsinanana dia miavaka amin'ny fahaiza-mandray vahiny sy ny fanamafisana. Saingy, mifanohitra amin'ny Singapore izay tena mandroso, any amin'ny firenen-kafa, tsy ny endri-piainana rehetra no mijery maoderina sy mahafa-po. Ao Laos ny fizahan-tany dia vao haingana, fa ny manampahefana ao amin'ny firenena dia manandrana manao ny fialan'ny mpandeha lavitra kokoa sy azo antoka. Ny lahatsoratra dia hanampy antsika hahatakatra ny fanontaniana toy ny fitaterana an'i Laos .
Ny fitaterana an'i Laos dia somary mivoatra raha oharina amin'ny mpifanolo-bodirindrina aminy. Antony roa no antony voalohany:
ny vokatry ny ady vao haingana.
Ny ankamaroan'ny mponin'i Laos sy ny mpizaha tany dia mampiasa ny serivisy, minibus, classic tuk-tukami sy ny fomba fitaterana an-toerana - sontau (kamiao miaraka amin'ny seza roa eo an-damosiny).
Fanomezan-dàlana ankapobeny ho an'ny mpizaha tany rehetra: ny vidin'ny fitsangatsanganana amin'ny fiaramanidina dia tokony hifampiraharaha alohan'ny hiverenanao avy eo. Tsy misy vidiny ankapobeny ho an'ny serivisy taxi na tuk-tuk. Na dia mihetsika ao an-tanàna iray aza ianao, dia mety ho hafa mihitsy ny vidiny. Ao an-drenivohitr'i Laos, Vientiane, ny fialantsasatra taxi dia miorina eo akaikin'ny seranam-piaramanidina Wattay , ny Bazaar maraina sy ny Bridge Bridge .
Tsy misy mpitandro ny filaminana ao Laos, fa aza adino ny manaraka ny fitsipiky ny lalana.
Ny lalana dia tsy mamela ny fiarandalamby mba hivoatra mavitrika sy hitazona toerana ambony amin'ny fitaterana ny mpandeha sy ny entana. Any Laos, ny ampahany amin'ny lalamby dia tena fohy, ary ny mpizahatany tsy mampiasa izany.
Hatramin'ny taona 2007, nisy sampana iray niseho tamin'ny fifandraisan'i Laos sy Thailand tamin'ny alàlan'ny Tetezan'ny Friendship Thai-Lao. Ny governemanta dia mikasa ny hanitatra azy 12 km mankany Vientiane. Tsy misy tambajotra fitaterana iombonana ho an'i Laos miaraka amin'ireo firenena mpifanolo-bodirindrina. Amin'izao fotoana izao, ny asa dia miara-miasa mba hampifangaro ny làlan'ny lalamby ao Laos - Vietnam sy Laos - China.
Ny halavam-potoanan'ny fiaran-dalamby ao Laos dia 39,5 arivo kilaometatra, izay 5,4 arivo kilaometatra monja no voarakotra. Amin'ny ankapobeny, ity no làlambe lehibe mifandray amin'i Laos miaraka amin'ireo firenena mpifanolo-bodirindrina. Ny hetsiky ny fitaterana an-dalàmbe any Laos dia mifanalavitra.
Ny tambajotran'ny làlambe Laos dia mampifandray an'i Thailandy amin'ny alàlan'ny fiaramanidina voalohany sy faharoa Amoron-tsambo sy Laotiana. Hatramin'ny taona 2009, ny fananganana ny tetezana fahatelo dia mitohy, ary amin'ny drafitra goavana ataon'ny governemanta roa tonta hanangana ny tetezana fahefatra. Hatramin'ny 2008, misy làlambe iombonana miaraka amin'ny Sinoa Kunming. Ankoatra izay, avy any Savannakhet mankany amin'ny sisintanin'i Vietnam, dia nisy ny lalana vaovao nisokatra, ary nanamora ny fotoana fialan-tsasatra tany Laos.
Ny serivisy fiara fitaterana dia vao haingana kokoa ny lanjany, efa nampidiran-dàlana ny fiarandalamby, navaozina ny fiarandalamby, miharatsy ny famoahana teknika. Mivezivezy any an-tanàn-dehibe sy eo anelanelan'ny faritra ny làlan'ny bus.
Sontau dia ampiasaina amin'ny fitsangatsanganana vitsivitsy eo anelanelan'ny tanàna, indrindra any amin'ny faritra avaratr'i Laos. Ity karazana fitaterana ity dia mandeha eny amin'ny làlan-tany.
Manana fiara mivezivezy ao Laos , saingy tsy dia mivoatra loatra. Noho ny tsy fahampian'ny kalitaon'ny làlana, ny fisotrihana ora sy ny fiantohana fiara dia lehibe loatra amin'ny fampiasana fiara matetika sy isan'andro. Ao Vientiane, mora kokoa ny maka taxi, ny mpizaha tany, saingy any amin'ny tanàna hafa noho ny haben'ny vitsy dia tsy azo atao izany. Na ahoana na ahoana, dia mora kokoa ny manofa bisikileta, bisikileta, na mipetraka ao anaty tuk-tuk. Ity no fiara lehibe indrindra ao Laos.
Ny reniranon'i Laos no an'i Mekong, ny reniranon'ny ankamaroan'ny firenena dia an'ny koveta mainty. Araka ny vinavinan'ny 2012, ny halavan'ny onjam-borona ao Laos dia 4,6000 km.
Manomboka ny Novambra ka hatramin'ny Martsa, ny fitsidihana rano dia nanjary làlana tena lehibe indrindra ho an'ny mpizaha-tany izay te-hampihenana ny fifandraisana amin'ny lalana feno vovoka. Afaka atolotra sambo, sambo kely, sambo mpitondra entana ianao. Rehefa misafidy, eritrereto ny haavon'ny rano ao amin'ny renirano. Mandritra ny vanim-potoanan'ny haintany, dia misy ny trangan'ny fitaterana an-tanety.
Ny fahantran'i Laos dia tsy misy fiantraikany amin'ny fivoaran'ny aviation. Hatramin'izao dia misy 52 ny seranam-piaramanidina miasa ao amin'ny firenena. Saingy ny 9 amin'izy ireo dia manana lalan-dàlana tahaka ny asphalted. Ao amin'ny seranam-piaramanidina Iraisam-pirenenan'i Wattai, maherin'ny 2438 metatra ny lavany.
Ny seranam-piaramanidin'i Laos dia ao amin'ny tanànan'i Vientiane, Luang Prabang ary Paska. Misy fiaramanidina be dia be ao amin'ny firenena, fa ny avoakan'ny tapakila avo dia avo, fa tsy ny mpizahatany rehetra ihany no afaka manome vola be toy izany. Ny antony dia tsotra: ao Laos, iray monja monopole iray monja - ny Airline nasionalin'ny Lao Airlines.
Mandeha ny diany mankany Laos, aza hadino ny mitondra rano fisotro sy sakafo: lafo be eny an-dalana izany. Ilaina ihany koa ny mitahiry ny faharetana, tsy misy haingam-pandeha be any amin'ny làlambe sy serpent ao an-toerana.
Hazelita - fambolena sy fiahiana
Chemistry ho an'ny volo lava
Fanamafisana ny fambolena amin'ny Klostilbegitom
Apricot Jam ao amin'ny Multivariate
Fonosana vita amin'ny hazo
Lamba fotsy lava
Ny fahantrana 29 herinandro - fivoaran'ny foetus
Fanafody fitsaboana amin'ny fo - lisitra
Noho ny fisoloana ny sakafo?
Bokin-tsakafo miaraka amin'ny tanana manokana
Devyasil miaraka amin'ny fahatarana isam-bolana
Atreho eo amin'ny lamosina - ahoana no fialana?